UYILO LWASEKHAYA LWEFAMA (NGAPHAKATHI NANGAPHANDLE KWENGCINGA) - UYILO LWENDLU
Eyona uyilo Lwendlu Uyilo lwasekhaya lweFama (ngaphakathi nangaphandle kweNgcinga)
Wamkelekile kwigalari yethu yamakhaya anoyilo lwendlu yefama yanamhlanje kubandakanya ngaphakathi kunye nemibono yangaphandle onokuyisebenzisa.
Ngaba uke wanqwenela i-rustic encinci, encinci yaseScandinavia kunye nokuqaqanjiswa kweShabby Chic endlwini yakho? Ngaba uyacinga ngeziqwengana zomthi ohlanguliweyo, iindonga ezimhlophe ezimhlophe, kunye nokukhanya okuqinisekileyo kweediliya? Ewe, uyilo lwale mihla lwamaFama aneempendulo kuko konke.
Kungekudala indala, isitayile sendlu yangoku sefama saye saqaqamba ngo-2015 kwaye ukusukela ngoko, siye saqhwatyelwa izandla ngenxa yempembelelo yaso eguqukayo kunye namandla kubanini bamakhaya. Olu hlobo lwe-eclectic luye lwavuselelwa kuyilo lwasekhaya lwefama enobuchule obunobunkunkqele kunye nokungaphelelwa lixesha.
Uyilo lwasendlwini yokufama lutsala inkuthazo enkulu evela kwimizi-mveliso, izitayile zakudala kunye nezesintu ezaziwayo ukuba zikhona ngokuzimeleyo kwaye zithande ukubandakanya ezinye zeempawu eziqaqambileyo zeli xesha.
Isiseko sale ndlela silele kumhlaba ovulekileyo, ophangaleleyo kunye nemiphezulu ebonakalayo ukubonisa imeko yokukhanya kunye nobuthathaka. Imigca ecocekileyo necekeceke, iinkuni ezifudumeleyo kunye neendlela ezingathathi cala zivula indawo yakutshanje yokufama ibe yindawo entsha, eyamkelekileyo nenobukumkani.
Uhlobo lwale mihla lweFama
Uyifumana njani indlu yokuFama yanamhlanje?
Iifama zangoku zeFama
Isitayile seBarn-Style yangaphandle
Izakhiwo zangaphakathi zeFama
Pale & Cima Iindonga eziMhlophe
Isiseko esijikeleze intuthuzelo kunye nobunzulu obunzulu kwi-rustic charm kunye nokubetha okuncinci, esi sitayile sinika uluhlu olubanzi lwezinto zoyilo ezikhethekileyo kuzo zonke izithuba endlwini. Makhe sijonge kwezi zinto zinomdla ezinokuthi ziqwalaselwe kwindlu yangoku yefama kwaye zikwenze uzive woyikisiwe kukujonga kwazo kwendalo.
• Imigangatho yeplanga ebanzi
• Izixhobo zokuvuna
• Ifanitshala efanelekileyo
• Imibala yendalo
• Iinkuni ezibuyisiweyo
• Izixhobo zepine
• Izinto ezenziwe ngentsimbi
• Iifaskoti ziyazika
• Amalaphu emveli
Ukukhanya okugqithileyo kwendalo
• Iimpawu zeenkuni zeRustic
Ukuhlaziya ikhaya lakho kwisitayile sendlu yanamhlanje kunye nokudibanisa nesimbo sangoku, sangoku, okanye setshintsho kunokubonakala kunzima kodwa kunokufezekiswa ngokulula. Ukuthinta nje okumbalwa okongeziweyo, ukuhonjiswa okuncinci kunye nokutshintsha kancinci kunokutshintsha ukujonga kwendlu yakho kwimbonakalo efanelekileyo yendlu yefama.
wendy williams ixabiso lomtshato
Ukuchazwa ngemfudumalo kunye nokuthambeka kwendalo, umaleko womthi kwifenitshala okanye amalaphu azolileyo kwifenitshala inokuba sisiqalo esimnandi kwimbonakalo yendlu yasefama yanamhlanje. Amakhaya emveli anokufuna ukususa izinto ezixineneyo, iimpahla ezinemibala yejazzy kunye neepateni ukunika ukucoceka nokuhlelwa okuhle.
Ukufumana isitayile sendalo ngokongeza imibala kwi-rustic feel kudlala indima ebalulekileyo. Umzekelo, iinkuni ezikhutshiweyo zemithi zazingadlala njengendawo ekugxilwe kuyo endlwini kwaye zinike isazisi indawo.
Ukupeyinta amagumbi anemibala yemibala engathathi hlangothi kunye nokuthintela imibala eyahlukeneyo kunye nokuthelekisa okanye ukongeza iinkuni kwifenitshala okanye kulwakhiwo kunokunika imvakalelo yokuvuna kunye neye-antique kwindawo yakho echaza ukujonga kwendlu yasefama yanamhlanje.
Akumangalisi ukuba olu hlobo lufuna indawo ethambileyo; Ukongeza izityalo zangaphakathi, ii-cushions ezigqithileyo kunye ne-hue efudumeleyo, evulekileyo iya kulwamkela uvakalelo kwaye yenze indawo yakho ibe bhetyebhetye kwaye ingaphelelwa lixesha ekhokelela kwiindwendwe ezincoma indlu kwaye zibile iliso.
Ngenxa yala maxesha kule ndlela, zimbalwa iidont ezivela kwizinto zemveli ekufuneka ziqwalaselwe; Iingcango zebarn inokubonakala ngathi yeyona nto inomtsalane kuyilo lwendlu yasefama, nangona kunjalo le ndlela ineendleko ezinokuthi iphele ngokuhamba kwexesha.
Iimpawu zeediliya kunye nezinto zobugcisa zichaza ubunyani, kodwa ukusetyenziswa kakhulu kunokubangela ukuba indawo ijike ibe lilizwe. Kwangokunjalo, ii-saxophones, iibhayisekile kunye neejari zemason zinokubonakala ngathi zongeza into kwaye ziphele zichitha ukucoceka kwendawo.
Uhlobo lwangoku lweFama yaseFama lungaphezulu nje kwendlela yoyilo. Isusela kwizixhobo zokusebenza ukuya kwifenitshala ukuya ngaphakathi nangaphandle nakwisakhiwo sangaphandle. Ngobubanzi obubanzi, le ndlela yoyilo ibonisa ukuba yimvakalelo yokuba abaninimzi bajonge phambili ekuyifundiseni kwiindawo zabo.
ukutyibilika kwamasango eendlela ezihambayo
Olu hlobo loyilo lufuna ukudityaniswa kwezinto zala maxesha nezesintu kwii-exteriors ukunika uluvo olugqibeleleyo kodwa lubabazekayo emakhayeni. Kubo bonke abo bajonge ukuyilungisa kwakhona indlu ukuze banike ukujonga indlu yasefama okanye abanesakhiwo esitsha somhlaba, zininzi izinto ezahlukileyo ekufuneka ziqwalaselwe.
Zoba ugqozi kwisitayile saseScandinavia kwaye uhlambe iindonga nge-beige, ngwevu, mhlophe okanye ngombala omhlophe. I-hues elula ye-akhawunti yamava amnandi kwaye athambileyo aqhubela phambili ukukhanyisa indawo kwaye ibenze babonakale bakhulu. Usenokude ushiye ezo ndonga zingagqitywanga ngodaka olumxinwa olumhlophe okanye ngepeyinti kulo.
Iindawo zokugcina iifama zemveli zazidume ngokuhlala ngaphandle yiyo loo nto into ivuselelwe kuyilo lwala maxesha. Inkcubeko yamava angaphandle nangaphandle kwaye onwabele ipropathi kunye nokuyingqongileyo kuye kwacaca kwiindawo zokugcina iifama. Ezi poranda zigqunyiweyo zivumela abaninimzi ukuba bonwabele imozulu enethayo ngelixa betha iti yabo yangokuhlwa. Iipatio ezigutyungelweyo zihlala zisetyenziselwa indawo engasemva kwendlu.
Iphefumlelwe kakhulu yindalo, ukuvuleka okukhulu kushunyayelwa ikakhulu ngabanini bamakhaya ukuze bazive bephumile ngaphakathi. Kwizindlu zeefama zesintu, iifestile zenziwe ngenjongo yokuba zibe nkulu ukugcina iso ngaphandle. Nangona kunjalo, ukuvuselela kubuchwephesha bwanamhlanje, ezi festile zikwazisa ukukhanya kwelanga okuninzi ukukhanyisa ngaphakathi.
Izibane zetotshi zesitayile seBarn zisetyenziselwa ngaphandle ukukhanyisa ifaçade. Ezi mveliso zakhiwe ngentsimbi ebunjiweyo okanye iglasi ekhutshiweyo ukunika ukubonwa kwe-rustic nakwinto encinci.
Izinto ezininzi ezitshixwayo endlwini zifana kakhulu nesitayile sendlu yanamhlanje yefama. Eyona nto isetyenzisiweyo emnyama okanye ngwevu, olu phawu longezayo luchaphazela ubunyani bendlu.
Uyilo lwangaphakathi lwefama yangaphakathi mayela nomxube ophantsi welizwe kunye nomxholo othobisayo. Ijikeleza umbandela wentuthuzelo ekuchazeni isitayile kunye nokwakha i-aura yendalo yabanini bamakhaya. Ubungqongqo obunamandla kunye nomdlandla unokuviwa ngaphakathi kwendlu yasefama eyandisa imo yethu kunye nokusidibanisa kwiindlela ezahlukeneyo zobomi basefama.
'Wabi-Sabi' ligama elihambelana nesi sitayile yoyilo; Ukuchazwa kobuncinci bexesha kwaye uyilo lwelizwe; 'Entsha ukanti endala' iyazukiswa ngokuchanekileyo kwizinto zabo zoyilo. Ibhiyozela isitayile esingagqibekanga ngokusebenzisa iiplanga zomthi ezixinzezelekileyo, izitena ezingagqitywanga ezinamatye okanye udonga lwekhonkrithi, ifanitshala yesinyithi evulekileyo kunye nezibane zeshishini.
Ukwenza lula ukuziva, masiqwalasele ezinye zeempawu eziphambili zangaphakathi zekhaya zasefama.
Xa ubhangqiwe malunga nokukhanya, iindonga zomoya, i-rustic woodwork ithambekele ekunikezeleni ngenkangeleko yendalo kunye neyamashishini kwindawo. Ungawuphatha umthi nge-varnishes ekhethekileyo okanye amabala ukuze uwagcine amaxesha ngamaxesha ngokubonakala okuyinyani. Ulwimi kunye ne-grove yokhuni oluphantsi , iinkuni zivule imiqadi kunye iisilingi zomkhumbi Zonke zizinto ezidumileyo kumakhaya efama anamhlanje.
unxiba ntoni kwitheko lokuzibandakanya
Iindonga ezimhlophe ezingacacanga okanye ezimhlophe zexabiso ziyakhiwa ukuxhasa ukutyibilika komthi okhuni. Iindonga azibonakaliswanga ukuba zintle, zinemibala eyahlukeneyo zipeyintwe okanye iphepha lodonga lenziwe, endaweni yoko zihlanjwe zimhlophe ngokwendalo.
Iikhikhini ziyintliziyo yamakhaya ethu. Nangona kunjalo, ubungakanani kufuneka bube bukhulu ngokuthelekisa kwaye buguquke. Amakhitshi asekhaya asefama aphethe amakhitshi amakhulu ngenxa yokupheka amaqela amakhulu amafama kunye nemikhosi. Ezi zivuselelwe ukunika umnxeba we-classic ngendlela yakudala ye-eclectic. Imiphezulu yeetafile yomthi kunye nezinto zesiqithi zizinto eziphambili ekufuneka ziphunyezwe ngomxube weekhabhathi zeglasi kunye neeshelfu zomthi.
Kunqande okwenziweyo ngokuzisa indalo. Umthi wendalo, umqhaphu, i-hemp kunye nelinen zizinto ezifanelekileyo eziza kusetyenziswa ezinokuhambelana nezinto zangaphakathi kwaye zongeze kubuhle bendlu yefama.
Ukuphuculwa kwezinto eziphambili sisitshixo kuyilo lwangoku lwefama. Sebenzisa ukugqiba okuphezulu kwamatte kunye nokuthintela izinto ezimenyezelayo kunokuqinisekisa indawo yakho kwimbonakalo yendalo yefama kunye nokuseta imeko eqhelekileyo kunye nentofontofo. Yazisa ngodonga lwezinto ezibonakalayo kunye neemveliso zeshishini kwindawo enemigca ethe tyaba, ethe tye kunye nokuxinana okuncinci.
Uyilo lwangoku lwefama yimveliso yokudibanisa okwangoku kunye nesiko ngelixa ugcina i-rustic touch ebhodini. Sebenzisana nendala kunye nentsha ukunika ubunyani kunye nokubamba okunamandla kwisithuba. Olu hlobo loyilo ludibanisa ngokufanelekileyo imiqadi yeplanga exinzelelweyo kunye neentsimbi zanamhlanje zokunika imveliso yeediliya. Jonga inqaku lethu ku imiqadi yeenkuni ukubona ukuba ungayisebenzisa njani le ndlela ekhayeni lakho.
Iimbono zezipho kubazali kwisikhumbuzo
Indlu yasefama yanamhlanje enesimbo sendabuko somnyango waseDatshi
Igumbi lokulala lokulala kunye isilingi evaliweyo
Ukuphepha imibala yejazzy ukwenza lula ngaphakathi ngaphakathi ngendlela ecekeceke ngakumbi eyahlukileyo kunokucoca indawo yakho ngokujongeka kwendlu yasefama. Olu hlobo luvusa ubunewunewu obusezantsi, ubunyani bezixhobo, i-aura yesitayile ekhululekileyo kunye nokugqitywa kwendalo ngaphakathi ngaphakathi. Umahluko omncinci wee-shades zabamhlophe, ezingwevu kunye nabamnyama ziyajongwa ngeethinti ze-orenji etshisiweyo kunye neetoni zomhlaba.
Nangona amagama, aMhlanje kunye neFama yasekhaya inokubonakala iphikisana kunye, i-duo ayikhe iphoswe ukuba ibekwe kwimixholo yoyilo. I-Chip kunye noJoanna Gaines baphakamise imbonakalo yokwenyani yesitayile yoyilo esasifumana ukuthandwa kwangoko ngexesha lokuvela kwayo.
Le ndlela ye-eclectic eya kwizitayile zoyilo ezininzi ikhokelela kwisikhumbuzo sokuvuselela isitayile sendabuko sendlu yasekhaya kunye nendlela yala maxesha yokungenisa indawo. Esi sitayile sinendlela yokuphila ngakumbi kunoyilo ngokwalo. Luvakalelo olucinga ngabanini bamakhaya abaninzi ukusuka kwizizukulwana kwaye alutshintshanga kuphela ubuntu babo kodwa luhlaziye uzuko lobukho balo.
Ngoyilo olunxulumene noko jonga igalari yethu ye Iifama zasekhitshini zasekhitshini izimvo Apha.
ilokhwe yomtshato indleko zokucoca ezomileyo
Umahluko phakathi kwendandatho yomtshato neyomtshato
igumbi lokutyela elineenqanawa
igaraji yajika yaba ligumbi lokulala
ilitye leshawa lomlambo